Siqale unyaka kuSurprise. Aubrey kunye neMatrin Series, nguPatrick O'Brian | Uncwadi lwangoku
Siqale unyaka kuSurprise. Aubrey kunye neMatrin Series, nguPatrick O'Brian
Ukumangaliswa kwefrigate (ifoto esuka kwincwadi Ukwenza kwe-Master kunye ne-Commander-Icala elikude lehlabathiNguTom McGregor. Umbhali waseBritane uPatrick O'Brian (1914-2000)
U-Eva woNyaka oMtsha wawungenakwenzeka kuthi thina bangenziwanga nge-confetti kunye nee-sequins, ke ndakhetha ukwenza i-cinema elungileyo. Ukhetho, olungasileliyo: UMphathi kunye noMphathi. Olona nxweme lukude emhlabeniNguPeter Weir (2003). I-adventure yolwandle egqibeleleyo evela kuthotho olugqibeleleyo loncwadi.
Ngendlela, ndenze esinye isisombululo kule 2017 isandula ukukhutshwa: ndiphinde ndifunde izihloko zam endizithandayo kolu luhlu lubalaseleyo. Ibhalwe ngu UPatrick O'Brian iminyaka engamashumi amane emva kwinoveli yakhe yokuqala, The Adventures of UCaptain Jack Aubrey kunye nogqirha waseSpain -Irish kunye no-spy Maturin unyana kubalulekile kuwo wonke umthandi olungileyo wohlobo. Eli yayilibali lam lothando nabo.
Ndikhumbula ndibona iincwadi ndihlala ujonge imifanekiso emnandi kumaqweqwe. Sele bevakala kum ngaxeshanye Ndafumanisa ukuba uPeter Weir wayeza kuthatha imovie ezo zivalo. Khange ndibenexesha lokuqala funda, uqokelele kwaye umangaliswe yisaga yeziganeko zaselwandle ezingenakuthelekiswa nanto kwaye akunakwenzeka ukubetha. Ewe ewe, ndiyavuma kwaye andikhathali konke konke: enkosi kwezo ndaba ndizifumene.
Kodwa kwakhona olu hlobo Zombini ezoncwadi kunye nesinema- Inomdla kum kuba ndikhumbula. Ndikwanayo ithuba (kunye nethamsanqa) lokuhamba ngesikhephe kwaye wazi ukuba bunganjani ubomi elwandle.
Okulindelweyo kwakungafezekiseki. Iikhonkwane umdla umdla nge Imvelaphi yezembali asusela kwi Uqhushululu lwaseFrance kude kube sekupheleni kobukhosi baseNapoleon. un ulwimi oluntsonkothileyo Ukufunda kwabafundi be I-slang yolwandle ngokubanzi pero tan nomtsalane enomtsalane ukusebenzisa nokumamela. Kwaye enye abalinganiswa abangenakulibaleka.
Malunga UJack Aubrey noStephen Maturin, abalinganiswa abaphambili, okanye abanye abalinganiswa abahamba nabo, phantse yonke into sele ibhaliwe. Kodwa ukushiya ecaleni izinto ezibonakalayo zokwakhiwa kwayo, i ukuqonda yintoni enokuba nayo yahlukile njengomfundi ngokwakhe. Kuphela kwafuneka baguqule ubuso babo bube yinyama negazi.
Lowo ngumlingo weemovie, nokuba yeyiphi na imifanekiso enokufakwa ngumfundi ngamnye. Obo bugqi abunakuba ngcono okanye buphumelele kwi ukulungelelaniswa kwefilimu okuhle kakhulu yenziwe ngumlawuli wase-Australia uPeter Weir we Olona nxweme lukude emhlabeni.
Ngaphandle kwezo utshintsho Yintoni eyenziweyo kwifayile ye- Iskripthi -i Inqanawa yoqobo yaseNyakatho Melika ukusuka kwincwadi yaba isiFrentshi kuba iYankees inokuba ngabantu ababi njani kumdlalo bhanyabhanya— zintle. Nangona mhlawumbi igama elinye lanele: ubuhle Ukukhanya, umbala, umculo wendawo nganye ekucingeni kunye nezo ziphinde zenziwa kwiscreen ziyafana. Kwaye intle nje.
Icandelo leqoqo lam le-Aubrey-Maturin.
Kwintombazana encinci okanye nabani na ongaziboni ekwazi ukubeka ezo zinto Amanyathelo angama-20 aphethe iinoveli, ubuqili, ubugqwetha, ukwaphuka kwenqanawa, useto lwangaphandle, amadabi angenakuthelekiswa nanto ungaya ngqo kwimifanekiso. Ngokuqinisekileyo uya kufuna ukuzifunda. Kwaye ukuba ungumthandi wolu hlobo loncwadi, olu ngcelele lukhona unyanzelwe kwaye ifanelwe yeyona ndawo intle kwishelfu oyikhethayo.
Abadlali babolekisa ngokuchanekileyo imiqondiso kunye nemiphefumlo kubalinganiswa boncwadi. Andibonanga namnye kubo ngelo xesha. Babengu Umnumzana allen (i-boatswain), esebenzayo kunye nesibindi Ukutsala uKapteni, engenakwenzeka kwaye ethandekayo Ukubulala, igqala kunye nomatiloshe ohamba neenkolelo UJoe plaice, abanomdla Mnu mowett... Kwaye ngokuqinisekileyo abalinganiswa ababini abaphambili, omnye izibini zoncwadi lokwahluka ngakumbi, iindlela ezingcono kunye nokungaqhelekanga.
Kwelinye icala, ndiyamthanda kwaye ndiyinkimbinkimbi ugqirha Maturin, isiqingatha seCatalan isiqingatha saseIreland kunye nogqirha kunye nemvumi ebalaseleyo. Rational, echanekileyo, engqwabalala kwaye kwangaxeshanye igcinwe, inengcinga kwaye inomdla.
Kwelinye, uJack. Uxolelo, Umphathi uJack Aubrey Unethamsanqa. Ke egcwele bonhomieof a uburharha ngokukodwa neendudumo zayo risa. Kunye nabo iinkanuko nokugqithisa njengotywala, kunye neyakho ubuqili pirate jonga ngasemva kwexhoba, imvakalelo yokuhlonipha, uxanduva kunye nokuzincama, umyalelo kodwa nembeko. Kwaye oko ubuntununtunu ngaphakathi nangaphakathi kwaye buqulethwe kodwa kubonakala ngokucacileyo ekuthandeni kwakhe umculo, isikhephe sakhe, loo frigate umangalisayo Yimangalisa, namadoda akhe.
UPaul Bettany noRussell Crowe banyamalala nje kubo. Banokunikwa enye kuphela kodwa: batshintshile ukuphakama kwabalinganiswa boncwadi, i-nuance kuphela enokuxabiseka kubafundi beenoveli. Ngaphandle koko, zonke zazifezekile.
Andikho ngelo xesha nangoku andinakuba nenjongo kwaye nam andiziva ngathi. Kum oko kunjalo Olona luhlu lweyona ntlanzi intle maxesha onke. Kwaye bendifuna ukuqala lo nyaka mtsha ngokuphinda olo hambo luzukileyo. Ndimema wonke umntu ukuba enze esinye sezihloko zabo.
UAubrey kunye neMururin Series
Umphathi wolwandle kunye nemfazwe
Olona nxweme lukude emhlabeni
Elinye icala lomfanekiso
Ilungelo elilodwa lomenzi weemarike
Imibuliso elishumi elinesithathu yokuhlonipha
UClarissa Oakes, ungene ngaphakathi
Ulwandle olumnyama njengezibuko
Uhambo lokugqibela olungagqitywanga lukaJack Aubrey, ayipapashwa ngeSpanish
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » Siqale unyaka kuSurprise. Aubrey kunye neMatrin Series, nguPatrick O'Brian
Molo mvakwemini, ndifunde ngeMbali yezi ncwadi, ngemovie kaRussell Crowe. Ndifuna ukufika kodwa ndivela eMexico… Ndizifumene phi?
Molo Angelica. Enkosi ngengcaciso yakho. Ndathenga uthotho lwencwadi apha eSpain, kwivenkile yesebe kwakudala. Ndicinga ukuba ungabafumana eMexico. Ngayiphi na imeko, unayo kwiAmazon.
Thandana nomntu ofundayo
Ngale mini wazalwa uIsake Asimov